Imisebenzi eyaziwayo kakhulu ngo-2016. Ngubani omele ukukhawuleza, kwaye ngubani otshayelayo?
Ukuhlaziywa kwe-ruble kubangela ukunyuka kwexabiso lempahla yaseYurophu. Oku kuya kubangela ukuba kubekho uchungechunge lwee-bankruptcies zamashishini abasebenza kunye nokungeniswa kwezinto. Ngokuqinisekileyo, kwindawo yabo kuza kuvela izitolo ezintsha kunye nokuveliswa, kugxile ekudaleni nasekuthengiseni iimveliso ngaphakathi kweli lizwe, kodwa ingxaki kwizoqoqosho ngokubanzi iya kubangela ukuba iinkampani ezininzi zinciphise abasebenzi. Ngoko kufuneka ukhangele kwiimarike zabasebenzi kwangaphambili, ukuze kungabi ngezoshishino ngexesha lokutshintsha. Ngoko ke, yiziphi izakhono eziza kuba zifuna kule nyaka 2016?
Imisebenzi eyaziwa kakhulu yonyaka okhoyo Umsebenzi wesifundo esiza kuwa
Imisebenzi edume kakhulu yonyaka okhoyo
Okokuqala kuzo zonke iingcali zincoma ukunikela ingqwalasela kwimveliso yecandelo. Emva koko, oko bekuthengwa ngaphesheya, ngoku kuya kubakho ukuvelisa ngokwethu. Futhi kungekhona nje ukuvelisa, kodwa nokuyila. Ngenxa yoko, sinokulindela ukwanda kweemfuno zokusebenza ezizodwa, kunye nabasebenzi bezunjineli. Ukongezelela, ezobugcisa ziza kuba phakathi kwezinto ezifunwa kakhulu. Yaye imfuneko yalezi ngcali iza kukhula kungekuphela ngo-2016, kodwa iya kunyuka ngaphezu kweminyaka emininzi.
Imisebenzi eyaziwayo kakhulu ngo-2016
Kwiidolophu ezinkulu, ikakhulukazi eMoscow, kuya kuba nemfuno ekhulayo yabahlalutyi kunye nabaqeqeshi be-IT. Emva kwakho konke, ukuze unqobe le nkathazo, kufuneka ulungise umsebenzi wenkampani, i. ukulungelelanisa ibhizinisi kwiimeko ezintsha ezingqongqo. Ngenxa yezizathu ezifanayo, iingcali ezilungileyo ziya kuba nezidingo kummandla wokukhuthazwa kwemveliso kwiimarike ezintsha, kunye nabaphathi abanezakhono.
Kwixesha elizayo kufuneka kubekho imfuno kwintsimi yesayensi. Enyanisweni, iingcali zenzululwazi ayinakwenzeka ukuba zifakwe kuluhlu lwezakhono ezithandwa kakhulu ngo-2016.
Imfuno yokulungisa iingubo zokunxiba impahla iya kwanda. Leli thuba lokuvula ibhizinisi lakho ngeendleko ezincinci, njengoko inkampani inokusebenza ekhaya. Kwakhona, kuya kuba nemfuno ekhulayo yokulungiswa kwempahla yamakhaya kunye neemoto.
Ubugcisa, imfuno ezayo
Uluhlu lwezakhono ezazifunwa kakhulu ngo-2015, kwaye sele sele zikhona ngo-2016 ziya kubazisa abanikazi babo kwiziko lezeNgqesho, likhulu. Ngexesha leengxaki, imfuno yabathengisi, abaxhasi, abasebenzi bebhanki kunye neengcali zentengiso ziya kuncipha. Ngaphandle komsebenzi, abagcini bezinwele kunye nezinye iingcali ze-salon zihlala. Sekudlulileyo, inani labathengi beelonons ezihle liye laphantse. Nangona kunjalo, abasebenzi bee-salon zokunyusa izinwele abahluleka ukukhuphisana kunye nokuvala baya kuba nako ukubonelela ngeenkonzo ngasese ekhaya. Kuya kubakho imfuno. Emva koko, umsebenzi we-master based based master is always cheap, kuba akuyimfuneko ukuhlawula irenti ebiza. Kodwa ingeniso yabanxibi bezinwele ziza kuncipha kakhulu. Ukufuna ukhenketho kunye nezoshishini zendawo yokutyela kuya kuhlahla ngokukhawuleza. Kwamashishini amabini, akunakwenzeka ukunciphisa inani labasebenzi abaya kufuneka bafaneleke kwakhona. Iinkonzo zezeMtshato ziya kuba zifunwa ngaphantsi kwemfuno, oku kuthetha ukuba iifoto, abafowuni kunye nezinye iingcali zolu shishino ziya kulahlekelwa yingxenye ebalulekileyo yengeniso yabo, kunye nemisebenzi emininzi. Ngo-2016, le misebenzi iya kufuneka iguqulwe ibe yinto efanelekileyo neyimfuneko.
Umsebenzi ogqithiseleyo osebenzayo eMoscow 2016: uluhlu
Indlela yokugcina imali kwixabiso lokunciphisa ngo-2016?
Yintoni eya kuba ngowomnotho waseRashiya ngo-2016?
Kutheni i-ruble iwa?
Xa ukhetho lukaMongameli weRussia Federation kunye ne-USA 2016. Ngubani okhokela namhlanje?
Ukunqoba u-egoism ubudlelwane phakathi kwabantu
Iilalesi zeziteshini zokuvota kunye nezikhululo zokuvota ngoSeptemba 18 eMoscow naseSt. Petersburg. Indlela yokufumana indawo yakho yokuvota
Yiyiphi i-stagnation, ukunyuka kwamaxabiso, ukuhlaziywa kwemali, ukuhlaziywa, ukungafihli
I-spaghetti ebhaka kunye nama-sausages
Ungayiqonda njani ukuba umfana ufuna?
Iimbali ezimbalwa ezikumangalisa malunga noomama ozayo
I-omelette ye-Orange yesibini
Kungcono njani ukulala?
Iintlobo zemfundo kwintsapho
Izambatho ezintle ekhaya
Imoto ebiza kakhulu kwihlabathi: ezilishumi eziphezulu
Isobho seentlanzi kunye nekhefu
Indlela yokubhala isicatshulwa kwi-CSE kwi-Social Studies